Izindaba - Ukuqina kwangaphakathi kokuthambekela kwemboni yezemidlalo
Ukuqina kwangaphakathi kokuqina kwemboni yezemidlalo
ULululemon uthola inkampani yokuzivocavoca ekhaya iMirror
ILululemon yathola ukutholwa kwayo okukhulu kusukela yasungulwa, futhi yachitha imali eyizigidi ezingama- $ 500 ukuthenga inkampani yokuzivocavoca ekhaya iMirror. UCalvin McDonald ubikezela ukuthi iMirror izoba nenzuzo ngonyaka we-2021. Umkhiqizo oyisisekelo we-Mirror "yisibuko esigcwele". Lapho ivaliwe, iyisibuko esijwayelekile esigcwele. Lapho sivulwa, isibuko siyisibuko esisebenzisanayo esinekhamera eshumekiwe nesipikha, okukhombisa isimo somsebenzisi nedatha yokuqina ngesikhathi sangempela, futhi futhi kungaqedela izifundo ezibukhoma nabafundisi bempilo online.
NgoDisemba 10, uLululemon wakhipha umbiko wokusebenza kwekota yesithathu. Ukuthengiswa kwekota kukhuphuke ngama-22% unyaka nonyaka kuya ku-US $ 1.117 billion, umkhawulo wenzuzo yonke ukhuphuke waya kuma-56%, inzuzo ephelele inyuke ngo-12.3% yaya ku-US $ 143 million, futhi inani layo lemakethe liphindwe kabili. I-Adidas. Impumelelo kaLululemon ayinakwehlukaniswa nesipiliyoni sabathengi nokukhethwa komqondo wokuthengisa nokusebenzisana nabanye othisha be-yoga nezikhungo zokuqeqesha. Okokuqala, othisha banikezwa izingubo zamahhala ze-yoga, ukuze othisha bagqoke izingubo ze-Lululemon yoga zokufundisa. Laba thisha futhi sebephenduke “amanxusa emikhiqizo” kaLululemon ukuthuthukisa ukuqwashisa ngomkhiqizo. Ngasikhathi sinye, yethule uchungechunge lwezingubo zabesilisa neminye imikhiqizo eseceleni kanye nokuhlangenwe nakho okungaxhunyiwe ku-inthanethi ukukhulisa izethameli zomkhiqizo nesifiso sokuthenga.
Kuqhutshwa ukukhuphuka kwempilo yasendlini, ukuthuthukiswa kwemboni yezemidlalo yangaphakathi kuye kwathuthuka kancane kancane. I-Particle Mania ingumkhiqizo wezemidlalo. Imikhiqizo yayo igcizelela ukuqhamuka okuphindiwe kobuhle nobuciko. Ifaka umqondo wemfashini ephezulu ekwakhiweni kwezingubo zemidlalo, futhi izama ukuhlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube nezingubo zemidlalo ezivela ezinhlotsheni ezahlukahlukene zobuchwepheshe, amasiko nobuciko. Umkhiqizo wezemidlalo osezingeni eliphezulu lomqambi kaCarver. NgoNovemba 13, 2020, umkhiqizo wezingubo zezemidlalo iParticle Fanatic uqede umjikelezo wezezimali we-yuan C wezigidi eziyi-100.
Ngaphansi kwethonya lo bhubhane, imboni yezemidlalo ithuthuka ngokushesha, futhi ukukhuphuka kwezimakethe zokuqina komzimba endlini akunakushaywa indiva. Kungabonakala ekwethulweni okulandelanayo kwemigqa ye-yoga ngemikhiqizo yezemfashini nezokungcebeleka efana neNIKE nePUMA. Ngalesi sikhathi, ekuqaleni kukaMashi walo nyaka, i-Adidas ne-Nini Sum bahlanganyele ndawonye ukuqalisa isizini entsha yamamodeli wokusebenzisana kuphela kwabesifazane; okukhuthazwe ubuciko obuhlukahlukene njengokuphrinta kwesikrini nemidwebo yezithombe zangemuva, kuhlanganiswe namaphethini obuciko obudwetshwe ngesandla, kwavusa isizukulwane esisha sabesifazane. Thuthukisa izigaba eziningi, ezilungele ukuzindla nge-yoga, ukusebenzisa i-aerobics neminye imidlalo.
Ekhathazekile ngemidlalo nezempilo yabesifazane, i-NIKE ivule ngokusemthethweni imisebenzi yesipiliyoni samakhasimende wabesifazane be-VIP, ebandakanya nokwabelana ngolwazi lwezempilo lwabameli beNIKE nokunye. Okwesibili, i-NIKE iphinde yethule uchungechunge olusha lwe-yoga, eletha ulwazi olungcono lokuzivocavoca kubantu abathanda i-yoga, nokukhuthaza amandla namandla angakaze athintwe; ngaphezu kwezitayela ezifake imfashini, banaka kakhulu izindwangu ezisebenzayo futhi bathatha ukomisa okusheshayo okuyingqayizivele kwe-DRI-FIT okuphezulu Indwangu enwebeka ikhuthaza ukubola kwe-lactic acid emzimbeni womuntu, iqeda ngempumelelo ukubola nokuthamba ngemuva kokuzivocavoca, futhi kunciphisa umuzwa yokukhathala.
Ekomkhulu lakhe eMunich, uVeloine ungumnqobi we-ISPO2021 Fall Winter Award. IVeloine ingumkhiqizo wamabhayisikili we-premium owenzelwe abesifazane. Umkhiqizo uqinisekisa ukuthi abesifazane abaningi basalangazelela ukuzivocavoca ngesikhathi sokukhulelwa. Ngenxa yemilenze emikhulu yokukhulelwa, imvamisa kufanele bagqoke izingubo zamabhayisikili zamadoda, okungahambisani kakhulu nokwakheka komzimba kwabesifazane abakhulelwe besifazane. UVeloine usungule izingubo zabesifazane abakhulelwe zabesifazane abakhulelwe ngokukhethekile. Uchungechunge, luhlanganiswe nomklamo wobuchwepheshe, liletha ukuvikelwa kwabesifazane abakhulelwe.